आमा पनि यस्तो !! कन्चनलाई छोरा सागरले लगाए यस्तो आरोप !! वास्तविक कुरा यसरी खुल्दैछ « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
आमा पनि यस्तो !! कन्चनलाई छोरा सागरले लगाए यस्तो आरोप !! वास्तविक कुरा यसरी खुल्दैछ
ओएस नेपाल, पोखरा, १५ मङ्सिर । भूकम्पमा घर भत्किएपछि त्यहाँ डेरा गरेर बसेकी लगभग ५५–६० वर्षकी आमैको चिया पसल छ । त्यहाँ विहान–विहान खुब मिठो र सफा तरिकाले ती आमैको हातबाट बनेको आलु र प्याजका पकौडा खान पाइन्छ । सातबजेसम्म पाकिसकेको हुन्थ्यो पकौडा ।
म त्यहि बाटोमा आउँदै थिए । सीमसीमे पानीले भिजेकी एक अर्धबैसे युवती हाफ टिर्शट र कालो पाइन्टमा मन्द मुस्कान सहित बसेकी थिइन् । लाग्थ्यो मलाई देखेर कोही सहयोगी आयो या यसले चिया खुवाउँछ यातफेरि उसले चुरोट खुवाउँछ भन्ने जस्ता भाव मुहारमा देखिन्थ्यो ।
म त्यो बाटो धेरैपटक हिडेकी थिए । तर ती महिलालाई पहिलो पटक त्यस्तो अवस्थामा देखेकी थिए । नजदिकमा पुग्दा दिदीको शरिरबाट पिसाबको गन्ध र मुखबाट रक्सिको वासना आएको थियो । लाग्यो खल्तिमा भएको पैसा निकालेर दिउँ, होइन, पैसा दियो भने दिदीले रक्सि खालिन् ।